विश्वकप विजेताको पदक विक्री ! – HostKhabar ::
विश्वकप विजेताको पदक विक्री !
एजेन्सी : विश्वकप विजेता जित्दाको पदक फ्रान्सेली टोलीका एक सदस्यले लिलामी मार्फत विक्री गरेका छन् । लिलामीमार्फत उक्त पदक ७१ हजार ८ सय ७५ अमेरिकी डलरमा विक्री भएको बताइएको छ ।
जुनियलन्स लाइभ डट कममा लिलामीका लागि भनेर राखिएको थियो । तर टोलीका कुन सदस्यले आफ्नो पदक विक्री गरेका हुन् भन्ने अहिले सम्म थाहा भएको छैन । २ वर्ष अघि रसियामा आयोजना भएको विश्व कपको उपाधि फ्रान्सले जितेको थियो ।
यो पदक विक्रीले धेरैलाई आश्चर्यमा भने पारेको छ । खेल जीवनकै एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई कसैले यसरी विक्री गर्लान् भन्ने कमले अनुमान गरेका हुन्छन् ।
विक्रीका लागि राखिएकोमा लेखिएको थियो, विश्व कप विजेता फ्रान्सेली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यले प्राप्त गरेको पदक । विश्व कप सन् २०१८ जुन १४ देखि जुलाई १५ सम्म रसियामा आयोजना भएको थियो । विश्व कप ११ औं पटक युरोपमा आयोजना भएको थियो ।
विगतमा ब्राजिलियन महान खेलाडी पेलेले आफ्नो पदक विक्री गरेका थिए । उनले आफ्नो शहरमा अस्पताल खोल्नका लागि दुई वटा पदक लिलाम गरेका थिए । उनले एउटा पदक २ लाख ३१ हजार ४ सय ८१ र अर्को १ लाख ७३ हजार ८ सय २८ अमेरिकी डलरमा विक्री गरेका थिए । त्यस्तै विश्वकपको म्याच बल १ लाख ३ सय ८ डलरमा विक्री भएको थियो ।
हाम्रो खेलकुद डटकम